Izimonyo Dermaheal - kuba umkhiqizo umugqa zochwepheshe cosmeceuticals, okuyinto oluqanjwe Caregen Co, Ltd, etholakala e-South Korea. Lokhu 100% ukukhula okungokwemvelo, ngosizo okuyinto dermal fibroblasts amenable ekuvuselelweni, okuyinto kunomphumela esihle ekuvuseleleni. "Dermahil" got Izibuyekezo elikhulu: izithako zemvelo kanye kusebenta eliphezulu izimali akakwazanga wenze okuvelayo omuhle.
Lo mshini wezenzo kanye nokusungulwa
I asebenzayo izidakamizwa amalungiselelo lokulawula izinqubo lwempi, kwamangqamuzana wayo nokukhula kwayo zonke izingxenye dermis kanye epidermis. Ikakhulukazi ukulungiselela kahle "Dermahil" ekhuthaza fibroblast ukuvuselelwa kanye imisebenzi ebalulekile, okuyinto kuncike isimo sesikhumba futhi ebusheni bayo.
ukwelashwa Line izimonyo "Dermahil" kusekelwe izithako zemvelo eziye wadalwa ngosizo genetic engineering. Iningi lazo - peptides womuntu, noma kunalokho ikhophi yabo. Peptides kahle ezithinta impilo isikhumba: ukuvikela amaseli kusuka free radicals, kuvimbela photoaging futhi kuvimbele ukuthuthukiswa izifo umdlavuza wesikhumba oyingozi.
peptides eyengeziwe izindlela "Dermahil" (South Korea) kuhlanganisa enjalo izinto eziwusizo njengoba amavithamini, amino acid, ezikhishwe of amakhambi okwelapha, amaminerali. Ngokuhlanganyela compounds acid acid, baba nethonya eziyinkimbinkimbi esikhumbeni, uqinisa ke ezijulile futhi ayegcwele umswakama. Umthelela kudala izimo ezivuna ukuvuselelwa, okuyinto kuzoqala maduze ngemva kokwelashwa.
Iphinde kufanele sinake ukukhalipha Onjiniyela kusuka South Korea: Ngamunye izithako ezisebenzayo ibekwe emvilophini ekhethekile ngesimo nano-capsule osayizi. Ngenxa yalesi izinhlayiya engena ijule dermis futhi kalula "bayoba nezimpande ngaphansi" lapho, ezikhandla nomthelela nqgo fibroblasts.
izici Ukukhula ukukhuthaza cell ukuvuselelwa kanye, okubaluleke kakhulu, ke wathumela ukuba endaweni lapho zidingeka khona kakhulu. Against isizinda ukwelashwa nge "Dermahil" (South Korea) anda amasosha omzimba yeselula, ibhalansi amanzi evamile futhi umzimba lipid. Ngemva ukuqedwa izidakamizwa ukuhoxiswa syndrome okungaxhunyiwe ku-intanethi - lokhu ingenye izakhiwo zalo eziyigugu kakhulu futhi eyingqayizivele, okungukuthi kakhulu Cosmetology zokwelapha kusho ukunikeza isebenza kuphela uma esetshenziswa njalo ...
Mesotherapy kanye umugqa kusho "Dermahil" ngenxa yakhe
Mesotherapy - yokumelapha yezimonyo, okuyinto sihlose rejuvenation ngcono isimo sesikhumba yonkana ngokuhlala esasikhipha ke cocktail of ezisebenzayo. Ezikhathini zanamuhla ke ingenye yezindlela ezivame kakhulu rejuvenation kanye nokwelashwa ezihlukahlukene ubuso sezinwele dermatologic izifo.
"Dermahil Mesotherapy" wadala for rejuvenation qualitative impatho-cocktail, ehlanganisa izinto ezithile. imali yenkampani Mesotherapeutic Caregen Co, Ltd wadala yonke umndeni imikhiqizo, yakhelwe ngenhloso letsite futhi ezindaweni ezithize ebusweni. Nokho, kungakhathaliseki ukuthi uya khona, isakhiwo jikelele "Dermahil" ihlinzeka ukukhuthazwa ukukhula cell division, ukusungulwa lwamathambo collagen, kanye ukusebenza ukukhiqizwa evamile asidi i-hyaluronic okwagcina ulungisa isimo dermis. Lokhu kusho isikhumba bushelelezi nokuma kwendawo yayo, hydration ezijulile futhi rejuvenation. Nge "Dermahil" Mesotherapy isiba ikhambi dermatological kakhulu nezinkinga ezihlobene nokukhula.
Okukushoyo mesotherapy ayatholakala amabhodlela 5 ml. okuqukethwe kwabo yakhelwe ujova ku dermis. Inqubo wenziwa ngaphansi kokuqondisa beautician oqeqeshiwe. "Dermahil" uchungechunge ngenxa ngomuntu omelelwa yileli izakhiwo ezilandelayo:
SR - esetshenziswa njengoba izinqubo prophylactic retarding ukuguga, futhi ngenxa yokwanda ithoni bese kuyaqina yesikhumba.
SB - ithuluzi elihle ekhanyisa isikhumba ithoni kanye nokwelashwa hyperpigmentation.
HSR - ukuze aqede imiphumela izinguquko ezihlobene nokukhula, amafutha ezijulile.
SR olunzulu - I-ezisindayo futhi isikhumba ukuvuselelwa.
Ngakho, kungenzeka ukuthi imikhiqizo ebusweni ngamaqembu amabili main: I- isikhumba rejuvenation (SR, SR olunzulu, HSR) futhi ekwelapheni hyperpigmentation melanin futhi kujwayeleke (SB).
Dermaheal SR kanye HSR: izici, ukubunjwa, Ukwakheka
Dermaheal SR kanye HSR - kukhona izakhiwo izithako abakhathalelayo zemvelo, nezici ukukhula kanye peptides ezinikeza isikhumba yokutakula futhi rejuvenation. Busuka dermis cocktail izingxenye asebenzayo kuvuse ukuvuselelwa izindlela olunzulu ukukhula cell division. Eqinisweni, abasenzela wonke umsebenzi, futhi izindlela ezifanayo owenza umzimba bebodwa. Peptides ngekusebentisa emasu-genetic engineering, nakanjani nsé nalezo akhiqizwa dermis womuntu.
Effect yokuguga emiphumeleni elimazayo ukucindezeleka kwemvelo kuholela synthesis izakhi ezikulesi izinkinga zesikhumba. Iphazamiseke amanzi ibhalansi, kwehle ukukhiqizwa asidi i-hyaluronic, isikhumba ukuguga "phambi". Kwenzeka ngesinye isikhathi ngesikhathi esibi. Mesotherapy kufanele sisebenzise eningi kude ngenxa yokuguga. izingxenye ezisebenzayo "Izibuyekezo Dermahil 'mayelana nokuthi iziphi izinhlelo Ochwepheshe dermatologists futhi cosmeticians ukunikeza omuhle ukubuyisela zemvelo ukusabela umzimba e dermis, kanjalo ekuvuseleleni ke.
I SR Ukwakheka Dermaheal yakhiwa:
insulini-like ukukhula factor-1 ;
amaprotheni EGF, inkanuko cell ukukhula;
HSR Dermaheal, ngaphandle izingxenye ngenhla, yakhiwa asidi i-hyaluronic, okuyinto ngemva kokuthintana dermis ngokushesha, elikhishiwe kwezinye izinguqulo ibhalansi amanzi, amanzi zibopha ion nokuqondisa ukuba amaseli.
Ngenxa Ukwakheka ayegcwele e dermis abuyiselwe izinqubo zayo evamile okunempilo kubalulekile: synthesis mithambo ine-elastin collagen, asidi i-hyaluronic, lipid namanzi umzimba. Ngenxa yalokho, ithoni kanye isikhumba ebusweni ahambelana, imibimbi kusukela engajulile ukuze ezijulile eshelelayo. hydration olunzulu kanye nokudla tidies ngisho isikhumba driest. ukubambezela yonke inqubo yokuguga. Effect Kwabiwa kwesikhatsi: ngezinye izikhathi ngokwanele Yiqiniso eyodwa nje okwelashwa, nokuningi wakhe ukuthi bangaphinde babuye kuya eminyakeni embalwa (noma enze inqubo asekelayo).
ifomu Product - umfuma 5 ml. Isakhiwo okuthengiswa ibhokisi amabhodlela 10. Leli nani nje esanele ukwelashwa eliphezulu. Yiqiniso, konke kuncike esimweni ethize emtholampilo. Ukuze umuntu kungaba okwanele, futhi 5 amabhodlela. Izindleko umuntu ruble angu-700.
Ngaphezu kwalokho, nomkhiqizi inikeza okufakiwe powder cocktail Dermaheal SR kanye Dermaheal HSR - «Ukulekelela Face" kusukela "Dermahil". Inani elilodwa okufakiwe kuyinto ruble 400. I powder biomimetic iqukethe lokuhlushwa eziphakeme peptides. Bathuthukisa umphumela iziphuzo ekuvuseleleni futhi ashukumise emangqamuzaneni dermis uthuthukise.
Dermaheal SR Fundzisisa: incazelo, intengo
Ngezinye izikhathi, isikhumba kumele kube yokutakula olunzulu. I serum ezimbili isigaba "Dermahil SR Fundzisisa" inikeza isikhumba yokuvuselela ngesikhathi esifushane. Lokhu kunengxenye ekwenzeni lokuhlushwa eliphezulu izinto eziqukethwe nokulungiselela. Ukwakheka Serum yakha zingxenye ezilandelayo:
Ifomula yakhelwe amafutha ezijulile futhi isikhumba ukuvuselelwa. Umphumela iyabonakala ngokushesha okuningi kunalokho uma usebenzisa Dermaheal ekwakhiweni SR. ukwelashwa olunzulu isetshenziswa Ezimweni lapho abalulekile Izilonda, imibimbi zijule futhi zidinga ukuba kwakhiwe kabusha ngokuphelele.
izingxenye ezisebenzayo "Dermahil CP Fundzisisa" zishukumisa fibroblasts noma kwamanye amangqamuzana dermal ukwehlukana kanye nokuvuselela. Synthesis mithambo ine-elastin collagen, asidi i-hyaluronic nezinye amaprotheni luyanda, ekhuthaza isikhumba rejuvenation. Ngo dermis ukudala imikhumbi igazi: sithuthukisa iseli umsoco. Ithuluzi awunankinga yokwenze alulame emva laser ukwelashwa futhi amakhemikhali peels.
izidakamizwa Iyatholakala "Dermahil Fundzisisa" in vials, 5 ml, cocktail based therein futhi mesotherapy aphethwe. Inani umthamo ngamunye ruble angu-800. Ngoba kufike umuntu mumbe Inkambo yokwelashwa ngokuvamile ngokwanele 5 amabhodlela. Kungenzeka futhi ukuthenga isethi, ezazihlanganisa 10 amabhodlela ejwayelekile.
Dermaheal SB ngokumelene lesikhumba
Enye cosmeceutical belungiselela mesotherapy ubuso kuyinto "Dermahil" ngokumelene yobudala izindawo. Ngaphezu kwalokho, izinto asebenzayo sibe cocktail nomphumela ekuvuseleleni. Isenzo main kuhloswe ukucaciseleka nokususwa okuphelele izindawo esikhunjeni yanoma yiluphi uhlobo, kungaba ukulimala, ithonya kwelanga, ukucindezeleka noma izinguquko ezihlobene nokukhula. Umphumela ibangelwa ukunciphisa zamagama melanin - lo mbala, esiyingxenye amabala amnyama.
Ukulungiswa siqukethe peptides futhi CG-ASP CG-TGP2, arbutin, uvithamini C futhi akhiphe licorice impande. Peptides eziqukethwe lokuhlushwa 2 mg-ml, okungukuthi bona zivimbela ngokweqile melanin zamagama ngokufaka wehlise enzyme tyrosinase. Ngaphezu kwalokho peptides biomimetic sikhuthaze zamagama collagen. Izingxenye ezisele ukwenza njenge Antioxidants isikhumba brighteners.
Cocktail ekwelapheni hyperpigmentation ikhiqizwa iphakethe efanayo ukwakhiwa odlule - 5 ml isitsha ngalinye "mesotherapy" izinqubo. Intengo elilodwa "ukukhonza" kuyinto ruble angu-700.
Umenzi kusikisela ukusebenzisa booster cocktail zinyathelo: powder "Super Breitingen". It yakhiwa peptides okuhloswe ngazo ukunciphisa ukukhiqizwa melanin, ngokuvumelana nesimiso of lasungulwa. Kuvela ekuvimbeni tyrosinase enzyme, kanye engasenamahloni synthesis we melanocytes, lapho avele zombala. Kakade kwakhiwa melanin izidakamizwa ayikuvumeli "hlala" phakathi epidermis.
Izinwele ikhula ngokusebenzisa follicle izinwele lapho zivela. Ngemva "ophumayo" abo, babakhiphela ngaphandle bathola izakhi ezidingekayo ukuze amandla supply futhi kusukela follicle. Izinwele follicle futhi unikeza kwegazi igazi. Uma woniwa ngenxa yokuguga, ukucindezeleka, isifo, noma nezinye izici ezilimazayo follicle kufa. Ngenxa yalokho, izinwele uwela phandle futhi ungalokothi kumile follicle.
Ngokuvamile, umuntu nsuku zonke ilahlekelwa izinwele 50 kuya ku-100. Le nqubo engokwemvelo yokufunda kulungiswe corneum stratum. Uma inani elifanayo nezinwele luyanda kakhulu, futhi kuba lubonakale ngokubona okubonakala ngeso lenyama, kubalulekile ukuba ukhulume Alopecia. Naphezu kweqiniso lokuthi izimbangela zezifo eziningi, ngokuyisisekelo ukuphathwa kuyehla kube omunye: ukubuyiselwa amandla follicle izinwele. Mesotherapy usebenzisa izidakamizwa "Dermahil izinwele" njengoba akunakwenzeka ukuba sibhekane nale umsebenzi ongcono.
Dermaheal HL kuvusa amasha okukhulisa izinwele, kuqinisa isakhiwo sabo, sivuselela akhanye futhi umbala ukugcwaliswa, revitalizes ekhanda futhi kususa dandruff. Yini izidakamizwa kusekelwe? Ukophula peptides futhi biomimetic ekhuthaza sokuvuselela izinwele follicle futhi kuthuthukisa kwegazi we ekhanda kokusinika ama ukudla okufanelekile. Ngaphezu kwalokho, umkhiqizo iqukethe:
ithusi tripeptide - has nethonya elihle izinwele nokubuyiselwa ukwehluleka lapho hormone;
Antioxidants nama-amino acid.
Uphenyo cosmetologists Dermaheal HL omuhle: i-cocktail omkhulu ephatha Alopecia, okuyinto ubulokhu ihlala yezinkinga eziyinhloko ubudala futhi ukushintsha kwama-hormone emzimbeni. Inzuzo enkulu umuthi ngezithako zawo yemvelo kusekelwe peptides, efanayo ngokuphelele kulabo ezivezwa umzimba womuntu. Yokutakula kwenzeka ngaphandle ukucindezeleka isikhumba: dermis uthola ukuthi wayedinga ukuphila okuvamile.
ifomu yomkhiqizo kanye nezindleko imikhiqizo cosmeceutical kuyafana nezinye izindlela "Dermahil" ngoba mesotherapy. sokubuyiselwa Fundzisisa izinwele follicle nomkhiqizi inikeza powder okufakiwe "Ukulekelela Khair" peptide-based, ezithinta bonke ezenza banesibopho izinwele ukukhula nezinwele.
isikhumba Mesotherapy ezizungeze amehlo
Kungakhathaliseki ubudala, iningi labesifazane uhlushwa tindilinga amnyama futhi izikhwama ngaphansi kwamehlo. Ngokuhamba kwesikhathi, isimo imibimbi kuyinkimbinkimbi futhi isikhumba saggy. Dermaheal Eyebag Isixazululo yakhelwe ukunakekelwa olunzulu isikhumba obucayi emhlabeni emehlweni. Izingxenye asebenzayo zomuthi ungakwazi balahle puffiness, bushelelezi out imibimbi, nekugwema tindilinga amnyama, enikeza ukukhathala ubuso. "Dermahil" iso ikhiqizwa ingilazi izitsha eziyisikhombisa ivolumu 1.5 namamililitha. Ukwakheka cocktail Dermaheal Eyebag Isixazululo kuhlanganisa:
Oligopeptide-73 - imibimbi, kuthuthukisa ukugeleza kwegazi;
tripeptide-41 - kuthuthukisa amanoni;
nanopeptid-18 - kunciphisa ukuvuvukala, ezizokhuthaza ukukhiqizwa kwamangqamuzana asidi i-hyaluronic collagen, okuyinto enomthelela imibimbi;
oligopeptide-61 - eqeda ukuvuvukala nokuvuvukala, Kuyanda isikhumba.
Enye izidakamizwa "Dermahil" phambi kwamehlo iyona Isixazululo Circle. isenzo sayo kuhloswe siphungule lezi ziyingi amnyama ngaphansi kwamehlo futhi sithuthukise microcirculation. Ingasetshenziselwa isencane ukunikeza ubuhle umuntu ongakabi wathinta izinguquko ezihlobene nokukhula. Uphenyo cosmetologists izimali mesotherapy agudle ezungeze iso omuhle. Ochwepheshe uqaphele ukuthi ejenti kuyaphumelela futhi ephephile ngokuphelele ukusetshenziswa ngenxa Ukwakheka zemvelo. Kufanele ngisho isikhumba ebucayi futhi nomzimba.
LL Dermaheal: mpi ngokumelene amasentimitha ngokweqile
Lapho siyabhubha lipid umzimba, imali fat akhiwa okonakalisa ukuma nobuso okweqanda. Indlela ephumelelayo ukulwa nokungapheleli kuyinto peptides Dermaheal LL based and L-carnitine. "Dermahil" -lipolitik usebenza isimiso liposuction non-kuhlinzwa, normalizing umzimba lipid zamagama. I cocktail liqukethe:
phosphatidylcholine - oyenza ukugaya amafutha;
L-carnitine - uyisa fatty acid phakathi mitochondria ukuthi kukhona ngokwemvelo bawasuse umzimba;
decapeptide-4 - ngesivinini umzimba;
multivitamins kanye namaminerali;
iseli ukukhula factor LGF-1.
Dermaheal LL kunciphisa ngokweqile adipose izicubu, ezizokhuthaza ukukhiqizwa kwamangqamuzana mithambo ine-elastin collagen kuka kuthuthukisa isikhumba kuyaqina. Eqeda umphumela "orange ikhasi" isikhumba some ngokulungisa ukuma.
Isetshenziselwa akhombe wabuka ebusweni, izingxenye ezihlukene zomzimba, esinciphisa kwesilevu double futhi fat ngokweqile. Lipolitiki "Dermahil" - izidakamizwa hhayi nje ngobe kutawutfutfukisa lizinga liposuction, kodwa futhi isikhumba ephakamisa.
Solutions Ultra Galva
Ukwelashwa kwe-Galvanic ukusetshenziswa kwamanje kagesi wamandla aphansi namandla amancane ukukhuthaza izinguquko ze-physico-amakhemikhali emadermis. Inqubo ivuselela ukuvuselelwa kwamaseli. Ukuze kuzuzwe umphumela omuhle, ukwelashwa kwenziwa kanye nezixazululo ezikhethekile. I-brand "Dermahil", okubuyekezwa kwayo okuhle, ngaphezu kwamalungiselelo e-mesotherapy, ikhiqiza izixazululo ze-Ultra Galva. Zifaka i-peptide complexes eyenzelwe izinjongo ezithile:
AA - ukwelashwa kwe-acne kanye ne-post acne, izibazi nokuvuvukala;
I-FAA - ukuvuselelwa nokugwinya ukuphosa;
Ukulungiswa kwesibalo se-AC;
Ukuvuselela izinwele zezinwele nezinwele zokukhula;
I-SL - eyinkimbinkimbi yesikhumba esomile, ukwelashwa kwe-pigmentation.
Ukwakhiwa kwezixazululo kuhlanganisa ama-peptide anjengo-oligopeptide-24 (59, 72), decapeptide-4, tripeptide-41, acetyl-decapeptide-3, phosphatidylcholine. Izixazululo ze-Ultra Galva ezisuka ku-brand "Dermahil" zibuke kahle. Abasebenzisi baqaphela ukusebenza kahle kwe-Chile kanye nomphumela wesikhathi eside.
I-Dermahil izimonyo zokusetshenziswa ekhaya
Umkhiqizi uDermaheal ukhathalela ubuhle besikhumba sabesifazane kangangokuthi uye wadala yonke imali esekelwe kuma-peptide engokwemvelo, hhayi kuphela ochwepheshe, kodwa ekusebenziseni ikhaya. "Dermahil" - izimonyo zokunakekela nokwelapha, oklanyelwe ukuvuselelwa nokulungiswa kwezidingo. Umkhiqizo wemikhiqizo yi-creams, masks, foams, serums, ephethe imibimbi ebushelelezi futhi isondeza kakhulu isikhumba.
Ukulwa nezinguquko ezihlobene nobudala, kufanele uzame ukhilimu nge-hyaluronic acid Dermaheal Cosmeceutical Anti-Wrinkle. I-Serum ne-cream ye-eye kusukela ochungechungeni olufanayo zakha ukunakekelwa kwesikhumba esincintisayo. Ukulungisa ithoni, i-Dermaheal CC line inhle. Ama-creams anama-pigment-smoothing pigments, ngaphezu kwalokho, avikele elangeni, alinise futhi alondle, alwe nezinguquko ezihlobene nobudala. I-Peptide cream "Dermahil SS" ingathengwa ngokukwabiwa kabusha kwama-ruble angu-2500.
Umzila wezithokozi zokusetshenziswa ekhaya ugcwaliswa uchungechunge lwe-Dermaheal Hair. Imelelwa izinto ezintathu: i-shampoo conditioner, whey for hair ukukhula kanye mask Dermahil okunomsoco. Intengo yendlela eyodwa i-ruble engaba ngu-2000. I-Cosmetics i-Dermaheal Hair inomphumela omude, ivuselela ukukhula kwezinwele futhi inondla i-follicles, ilwa ne-dandruff, inika ukukhanya futhi ibe nombala ocebile kunwele ngalinye.
I-Cosmetics "i-Dermahil" ye-mesotherapy, ukuvezwa kwe-galvanic noma ukusetshenziselwa ekhaya kuyizinto zobuchwepheshe zakamuva emkhakheni wezobuchwepheshe bezakhi zofuzo, okuvumela ukusetshenziswa kwama-peptide wabantu abangamaphesenti angama-100 akhiwe ebhokisithri. Ukufika phezu kwesikhumba noma ngaphakathi kwalo, izingxenye zenza imisebenzi yesiko yezinto eziphilayo, ngaphandle kokuphazamisa ibhalansi futhi ngaphandle kokulimaza impilo. I-Cosmetics "Dermahil" iphephile ngokuphelele futhi i-hypoallergenic.
Esiphongweni eside noma esifushane: yini ukukhetha